Adịghị Factory Tọgharia iPhone enweghị Ịmara Top 4 Ụzọ
Ọ nwere ike na-eme onye ọ bụla n'ime anyị. Ọbụna ndị kasị mma n'ime anyị mkpa ụfọdụ oge fanye na-eku ume. Otú ahụkwa ka anyị na ekwentị. Mgbe gị iPhone dị nnọọ ifriizi na-akwụsị na-arụ ọrụ, ị nwere ike idozi ya site onwe gị na-adịghị mkpa na-agba ọsọ anya ka a ọrụ ozugbo. Mmepụta ihe nrụpụta bụ oké ihe ngwọta na ike ga-eji na-ewetara gị iPhone azụ a zuru okè ọrụ. Na ụlọ ọrụ mmepụta ihe tọgharịa ị laghachi gị iPhone ka ọnọdụ "ọhụrụ", n'ihi na ihe nile ga-ehichapu, ihe atụ music, foto, ngwa ọdịnala na ndị ọzọ na data na e kwukwara na n'oge gara aga. The iPhone nwekwara alaghachikwuru ya ntọala mbụ. Niile na ihe niile, ụlọ ọrụ ahụ nrụpụta pụtara na ị na-kpam kpam erasing gị data site na ekwentị na-amalite ya dị ka onye ọhụrụ.
E nwere 4 ụzọ ụlọ ọrụ tọgharịa gị iPhone:
Ngwọta 1. Factory Tọgharia iPhone Kpọmkwem on iPhone
Ngwọta 2. Tọgharia iPhone ka Factory Ntọala site iTunes
Ngwọta 3. Tọgharia iPhone ka Factory na Chọta My iPhone on iCloud (ọ bụrụ na gị iPhone na-efu)
Ngwọta 4. Gbalịa Software iji tọgharịa iPhone ka Factory kpamkpam (ndị kasị dịrị nchebe ụzọ)
Cheta na: 1) .Ọ bụrụ na ị na-aga na-anọgide na-eji nke a iPhone, ọ bụ OK na-agbalị Ngwọta 1 na Ngwọta 2. Ọ bụrụ na ị na-aga na-ere, inye ma ọ bụ na-enye gị iPhone pụọ, na ị na-ike-atụ aro iji Ngwọta 3, n'ihi na nanị ihe ngwọta 3 ga-niile ị data ehichapu kpamkpam, enweghị ohere ọ bụla na-agbake data gị iPhone, ọbụna Wondershare Dr.Fone maka iOS apụghị ime ya. Ọ bụ nnọọ ize ndụ na-ahapụ onye data na gị iPhone ma ọ bụrụ na ị na-aga na-ere ma ọ bụ nye ya.
2) .Tupu tọgharịa gị iPhone na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ị na-kwesŽrŽ ndabere gị iPhone:
* Copy data si ochie iPhone ọhụrụ ekwentị: Gbalịa Wondershare MobileTrans idetuo kọntaktị, ozi ederede, photos, music, videos si gị ochie iPhone gị ọhụrụ na ekwentị.
* ndabere iPhone data ka iTunes ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara iPhone data ka iCloud. Mgbe e mesịrị i nwere ike ịhụ ihe iPhone ngwá ọrụ, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS, wepụ faịlụ site na nkwado ndabere na mpaghara mgbe ọ bụla ị chọrọ kọntaktị gị, foto, ma ọ ozi ederede azụ.
Nzọụkwụ 1. Mee a ndabere gị data bụrụ na ị chọrọ ejigide gị music, ngwa ma ọ bụ foto.
Nzọụkwụ 2. Mgbe nkwado ndabere na mpaghara, gaa na Ntọala na ngwa na gbadaa na na General menu na enweta ya. Na ala na ị nwere Tọgharia menu. Enweta ya.
Nzọụkwụ 3. The ekwentị ga-ewetara gị a usoro nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta nhọrọ. Ahọrọ ndị kasị mma nhọrọ maka gị na enweta ya. The iPhone ga factory tọgharịa data ị họrọ.
Nzọụkwụ 4. The ekwentị ga-aka gị na ị na-erasing niile data. Ị ga-nyere a oke nke Kagbuo ma ọ bụ Ihichapu iPhone.
Ọ na-ewe dị ka otu abụọ nkeji tupu ị nwere a ohuru iPhone na-enweghị data ihe otú ebi.
The ọzọ nhọrọ bụ ị na-eji iTunes iweghachi gị iPhone. N'ihi bụ otu, niile nke gị data ga-ehichapu na ekwentị gị ga-adị ka ọhụrụ. Tupu ị nwere ike factory tọgharịa gị iPhone, jide n'aka na ị nwere ndị ọhụrụ mmelite nke iTunes na ị nwere gị data ndabere.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ ekwentị gị na kọmputa na mmasị USB na-eche a nkeji.
Nzọụkwụ 2. Họrọ gị iPhone mgbe ọ na-egosi na iTunes.
Nzọụkwụ 3. Pịa Weghachi iPhone button ọzọ na-akwado mmepụta ihe nrụpụta.
Nzọụkwụ 4. Lewe gị iPhone e weghachiri eweghachi. Nke a nwere ike na- ọtụtụ minit.
Ọ bụrụ na ị furu efu gị iPhone, na ị na-enwe ike iji Chọta My iPhone na iCloud iji tọgharịa gị iPhone na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ezere onye na-esi gị iPhone iji nweta onwe gị data. Ma akpa, ị kwesịrị ị na-eme ka n'aka na ị na o nyeere Chọta My iPhone na gị iPhone (Ntọala> iCloud> Chọta My iPhone).
Nzọụkwụ 1. Open iCloud.com na ihe nchọgharị weebụ na kọmputa gị. Abanye na na gị Apple ID.
Nzọụkwụ 2.Click Chọta My iPhone> ọhụrụ window, na n'elu, pịa All Devices. Na ndọpụta ndepụta, họrọ gị iPhone.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahọpụta gị iPhone, ị pụrụ ịhụ 3 nhọrọ dị n'okpuru ya: Play Sound, Lost Mode, ma ọ bụ nchicha iPhone. Pịa ihichapu iPhone ka ya na ụlọ ọrụ ntọala.
Ọbụna mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe resetting gị iPhone na iTunes ma ọ bụ iCloud, ụfọdụ data na gị iPhone ka dị, ma apụghị ịhụ anya. Na ụfọdụ mgbake software, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS, data na gị iPhone ga-natara mfe. Ọ bụ nnọọ jọgburu onwe maka ndị ọzọ na-esi gị data, nri? Ekwela ka ọ na-eme. Ị dị nnọọ mkpa na-agbalị Wondershare SafeEraser iji tọgharịa gị iPhone na Factory ntọala. Mgbe eji ya, ọ dịghị software nwere ike naputa data gị iPhone.
Nzọụkwụ 1 Download Wondershare SafeEraser
Pịa Download button n'okpuru iji nweta ikpe version nke Wondershare SafeEraser. Wụnye na ẹkedori ya na kọmputa gị. Na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-ahụrụ-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 2 Họrọ ụdị nke data erasing na larịị
Na isi window, họrọ ihichapu niile data na ngwaọrụ. Ọhụrụ window, mgbe 3 ụdị nke larịị awa, họrọ Ọkara. Ọ bụ na-atụ aro larịị. Ị nwekwara ike ịhọrọ Low na High. Pịa Malite.
Nzọụkwụ 3 Tọgharia gị iPhone na Factory ntọala
Mgbe ịpị Malite, ị pụrụ ịhụ ihe omume a na-amalite na-arụ ọrụ. Ọ na-ewepu foto niile, ederede ozi, na-akpọ ihe mere eme, oku na ndekọ, kọntaktị, ngwa, songs, videos, Apple ID, ntọala, akwụkwọ ahụaja, wdg na ndị ọzọ si gị iPhone. Mgbe ọ na-okokụre, a ọhụrụ iPhone bụ n'ebe ahụ.
N'ezie nke a bụ ihe ị na-adịghị eme kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe ị na-eme mgbe ọ na-abịa kpọmkwem ọnọdụ. Ka ihe atụ ma ọ bụrụ na ị na-ere gị iPhone ị kwesịrị ị na maa factory tọgharịa ekwentị gị otú ahụ ọhụrụ ọrụ ga-enweghị ohere data gị. Mgbe ị rụnyere ọtụtụ ngwa ọdịnala na-ịmụba na iPhone, a na-akpata nrụpụta bụ uru na ọcha si na ekwentị gị. Ọ bụrụ na gị iPhone freezes, na ikekwe mmepụta ihe nrụpụta bụ nanị nhọrọ na ị nwere iji nweta ekwentị gị na-arụ ọrụ ọzọ. Ma ka ị na-adịghị mkpa were ya na-ọrụ ahụ. Mgbe ụfọdụ ekwentị ga-agwa gị si onwe ya, na ọ bụ oge maka nrụpụta. Mgbe ọ na-ahapụ gị pụrụ iche ozi, dị ka "Usoro a na-apụghị agwụ agwụ." nke a bụ oge maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta, n'ihi na ọ bụ ekwentị na arụ ọrụ gabiga ókè. Na otu ezigbo ụwa nke iPhones mmepụta ihe nrụpụta ga-mere mgbe niile, n'ihi na ị chọrọ ekwentị gị na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè ma-adị ka ọhụrụ.
> Resource> iPhone> Top 4 Ụzọ Factory Tọgharia iPhone